Automatic DVD album ထွက်တော့မှာမို့ အဲဒါအတွက် အပြီးသတ်ပြင်ဆင်နေတယ်။ လက်ခံထားတဲ့ show ပွဲတွေဖျော်ဖြေဖြစ်တယ်။ magazine, journal interview တွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ LA မှာ BMW အမိုးဖွင့်ပြိုင်ကားလေးမောင်းဖြစ်တာလေး သဘောတွေ့ခဲ့ဖူးတယ် ။ အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့တော့မပြောတတ်ဘူး။ ဘီးလေးဘီးပါပြီး Aircon ကောင်း Engine ကောင်း ရင် အမွန်းအတွက် အလုပ်ဖြစ်တယ်။
အခုစီးနေတာ Honda ။ ဒါပေမယ့် Toyota စီးကြည့်ချင်သေးတယ်။ တခြားအမျိုးအစားတွေရောပေါ့။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းကြမယ်
ကိုယ်တိုင်မောင်းတာကြိုက်လား။ ဘေးက ထိုင်စီးရတာ ကြိုက်လား
မရှည်လို့။ လမ်းကြောင်းရွေးတာကအစပေါ့။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ပဲစဉ်းစားရင်းမောင်ဖြစ်တာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အမွန်းကားကိုမောင်းတာဆိုလို့အမွန်းမောင်လေးနှစ်ယောက်ရယ် အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ်ပဲရှိမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မောင်းရတာနဲ့ LA မှာ မောင်းရတာ ဘာကွာခြားမှု ရှိလဲ
ထိုင်ခုံ ဘယ်မောင်းနဲ့ညာမောင်းကွာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ညာဖက်ထိုင်မောင်းတာများတယ်။ အမေရိကမှာက ဘယ်ဖက် ထိုင်မောင်းတာပါ။ ကားလမ်းကို ညာကပ်မောင်းတာချင်းတော့ တူပါတယ်။ အမွန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကားမောင်းများတာပါ။ LA မှာ GPS ကြည့်ပြီးမောင်းရလောက်အောင် အနေမများပါဘူး။ အလုပ်အတွက်ပဲသွားတာ။ အဲဒီရောက်ရင် မန်နေဂျာပဲမောင်းပို့တယ်။ ပြီးတော့ Uber လို့ခေါ်တဲ့ အငှားကားတွေ စီးတာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တော့ ရိုက်ကူးရေးအတွက် အမွန်းမောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ သောက်ထားပြီး ကိုယ်က မသောက်ထားတာနဲ့ကြုံ ရင်ဖြစ်ဖြစ် မောင်းပေးတယ် ။ သူတို့ဆီမှာ နဲနဲပဲသောက်ထားဦးတော့ ရဲမိပြီဆိုတာနဲ့ မြန်မာငွေ သိန်းတစ်ရာလောက် ဒဏ်ငွေဆောင်ရပြီလေ။ သောက်ပြီးရင်မမောင်းရဲကြဘူး။
ကား Fashion နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြင်လေး သိပါရစေ
ဟီး... ကား Fashion ကို အမွန်းထက်တခြားလူငယ်တွေ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။ အမွန်းရဲ့ကားကို ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်တက်နေတာများလိမ့်မယ် ( ဟားဟား) Sticker ကပ်ရတာဝါသနာမပါဘူး ။မီးဆင်ထားတဲ့ကားမြင်ရင် ဘုရားပွဲလှည့်နေသလို ခံစားရတယ် ။ဘယ်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါနော်! သူ့အကြိုက်နဲ့သူပဲမို့လေ။ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အလှဆင်ကြတာကောင်းပါတယ် ။အမွန်းကတော့ ကားဆိုရင် အရှိအတိုင်းကို Polish တင်တာလောက်ကလွဲပြီး ဘာမှမလုပြ်ဖစ်ဘူး။
CarsDB အတွက် အမှတ်တရ စကားလေး
CarsDB က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး နဲ့ကားအရောင်းအဝယ်အများဆုံး Site လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားမှာ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့ အားထားရတဲ့ site အဖြစ် ထာဝရ တည်တံ့ပါစေရှင့်!
CIF တန်ဖိုးကို Brand အလိုက် Model အလိုက် နှစ်အလိုက် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်တဲ့ CarsDB ရဲ့ CIF Search